Car Mat, Car Seat Cover, Mota Roof Tende - Yuancheng
A Professional Mugadziri Uye Mutengesi In
Auto Zvishongedzo & Kunze Kwekunze
Bubble PE firimu zuva mumvuri nemaitiro akasiyana
200gsm bubble + color inoshandura PE firimu zuva mumvuri nekatuni pateni Mota sunshade yepamberi hwindo / bubble kumberi kwewindo mumvuri / bubble Sunshade / PE bubble yekudhinda mota zuva mumvuri Nguva Yekutungamira: huwandu (Zvimedu) 1000 - 3000 5000 - 10000 15000 - 20000> 20000 Est. Nguva (mazuva) 20 30 40 Kuti vataurirane Packaging Detailspackage Inosanganisira: 1 x Car Windshield Sunshade, 2 x Suction Cups bepa kadhi + OPP bhegi, 100pcs / ctn, ctn saizi: 62 * 55 * 67cm Basa: 1. Iyo pro ...
Kuvhara mota vhiri, PU uye eco-inoshamwaridzika TPR mhete yemukati, Yakagadzirirwa dhizaini Steering vhiri inovhara kubva pakudzima, kutsemuka uye kusvuuka kubva pakuvhenekerwa nezuva uye kwakanyanya mamiriro ekunze. Iyo Universal PU yekufambisa vhiri vhiri inopa 36,38 uye 40cm dhayamita kuti ikwane. 95% mota dziri mumusika, zvakare dzinogona kuburitsa ine hukuru hwakakura hwe42,45,47 uye 50cm inoshandiswa kuMarori .. Zvese zvifukidzo zvakagadzirwa nemhando yepamusoro kopi yeganda yeganda ine ruoko runogadzikana. Mulit mavara eganda ...
Yuancheng Portable Fridge Freezer 12V Car Refrigerator Car Fridge with Compressor Touch Screen for Vehicle Truck RV Camping Travel Outdoor Driving technical Specification YC-16SS DC CAR REFRIGERATOR Product Name: 16L DC Mota Refriji Yemamiriro ekunze Type: SN, N, ST, T Voltage: DC12V / 24V Refrigerant: R134a Kuchenesa kupisa: 20-55, Refrigeration tembiricha: -20 ℃ Kukura Kwechigadzirwa: 605 * 340 * 273.5mm Carton Saizi: 660 * 395 * 360mm Mutoro Wakawanda 20Ft / 288PCS 40HQ / 693PCS Nguva Yekutungamira: ...
Tri-Angle Yakaomarara yepamusoro yekupeta mota padenga tende
Vhura saizi: 210cm * 144cm * 170cm Goko rakaomarara rine chifukidziro chepamusoro nechepazasi, kupeta kuri nyore / mashandiro ari nyore, vanhu 3-4 vanoshandisa. Yakadzama Zvinyorwa: * Yakaomarara goko (kumusoro & pasi): ABS + ASA; * Mutumbi: 190gsm Giredhi shanu repolyester jira proof isina mvura: 2000); * Plate pani: 8mm kukwirira plywood * Matiresi: 5cm kukwirira PU furo + inogona kusha donje chivharo * Windows: 125gsm mesh Chigadzirwa Zvimiro: 1.The telescopic manera akabatana zvakananga netenga reimba, uye kurodha uye kudzikisa nhanho dziri nyore uye .. .
Yakaomarara kumusoro yekupeta mota padenga tende
Vhura saizi: 225cm * 211cm * 152cm. Yakaomarara goko rine repamusoro uye repasi chifukidziro, nyore mashandiro / yakakura nzvimbo, vanhu vana vanoshandisa. * Hard shell (kumusoro & pasi): ABS + ASA; * Muviri: 220g 2-akaturikidzana PU yekunamatira polyester machira (isina mvura: 3000mm); * Plate pani: 8mm kukwirira plywoo * Matiresi: 4cm kukwirira PU furo + inogoneka yekotoni chifukidzo * Windows: 110gsm mesh Zvimiro: 1. otomatiki kuvhura nekuvhara ...
Vhura saizi: 221cm * 190cm * 102cm Chitarisiko chakanaka / Manera uye mubhedha furemu zvakabatanidzwa 2-4 vanhu vanoshandisa Yakadzvanywa Chinyorwa: * Rokunze chivharo: 430g PVC tarp; * Muviri: 220g 2-akaturikidzana PU yekunamatira polyester machira; * Chimiro: aluminium; * Matiresi: 7cm kukwirira PU furo + inowoneka donje chivharo * Windows: 110gsm mesh Chigadzirwa maficha: 1. Inodzoreka Manera akabatana zvakananga netemberi yedenga ...
Zviitiko & Yekutengesa Show
Yakakurumbira Car Roof Tent, Mota Waini Inotonhorera, Mako Mota Inotonhorera, Inotakurika Mota Inotonhorera 12v, Vhara Pasi Pemotokari, 12v Mota Firiji Kutonhora,